Who Gets the Dog? (2016) မြန်မာစာတမ်းထိုး – Gold Channel Movies
Video Sources 2959 Views
Who Gets the Dog? (2016) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Breakups can be woof!Oct. 06, 2016USA95 Min.PG
မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုတို့အစ်မရေ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ခွေးချစ်သူများအတွက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ခွေးလေးတွေဆိုတာ အင်မတန် သံယောဇဉ်တွယ်ပါတယ် တစ်ချို့တစ်ချို့သော ချစ်သူတွေဟာ ခွေးလောက်တောင် ကိုယ့်အပေါ်သံယောဇဉ်မရှိ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတာ လက်ခံတယ်မလား တချို့ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ခွေးလေးတွေနဲ့ပဲ တစ်ကိုယ်တော် ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြတာပါ ဘာလို့ဆို သူ့တို့ရဲ့ပါပီလေးတွေနဲ့ကိုက်တဲ့ ဒက်ဒီ မာမီတွေကိုရှာမတွေ့လို့လေ
အဲ ဒီကားလေးမှာတော့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ စိတ်တူကိုယ်တူကို ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို အရမ်းချစ်တာပါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခွေးလေးရဲ့ဒက်ဒီမာမီအဖြစ်ကိုခံယူပြီး လက်ထပ်ထားတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ပါ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေအရ သူတို့ကွာရှင်းဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီခွေးလေးကို သူခေါ်သွားမယ် ငါခေါ်ထားမယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့ ခွေးလေးကို နောက်ဆုံးဘယ်သူရသွားမလဲ ခွေးလေးကရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ ဒက်ဒီနဲ့မာမီကရော သူတို့ရဲ့ချစ်သားလေးကို ဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဆိုတာတွေကို ဒီကားလေးမှာ ခံစားရမှာပါ
ဒီကားလေးကြည့်ပြီးတော့ ခွေးချစ်တဲ့အတွဲတွေ အကယ်၍များကွဲခဲ့သည်ရှိသော် (ဖွဟဲ့လွဲပါစေချော်ပါစေ မကွဲစေချင်ပါဘူး ပါပီလေးတွေဒုက္ခရောက်လို့ပါ) ခွေးလေးကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဘယ်လိုအပိုင်ချုပ်ထားမလဲဆိုတာလေးတွေ ကြိုစဉ်းစားထားနိုင်ကြပါစေ
ဒီကားလေးဟာဆိုရင် ratingလဲ မနည်းတာမို့ အမြန်ဆုံးကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးပါနော်
Translated &Reviewed by Yann Pyan
Encoded by Lwin Naung
Size 900/300 MB
Running time- 91mins
Original title Who Gets the Dog?
IMDb Rating 4.9 1031 votes
TMDb Rating 5.240 votes
Christine A. Donnelly
Download Nofile SD မြန်မာ 300 MB 302months gcmovies
Download Nofile HD မြန်မာ 900 MB 722months gcmovies
Download One drive SD မြန်မာ 300 MB 222months gcmovies
Download One drive HD မြန်မာ 900 MB 392months gcmovies
Download Google Drive Sd မြန်မာ 300 MB 302months gcmovies
Download Google Drive HD မြန်မာ 900 MB 582months gcmovies
Download Mediafire SD မြန်မာ 300 MB 352months gcmovies
Download Mediafire HD မြန်မာ 900 MB 1202months gcmovies
Download Openload SD မြန်မာ 300 MB 1582months gcmovies
Download Openload HD မြန်မာ 900 MB 5112months gcmovies
© 2019 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved. Powered by DooThemes